Flash_News: भेटियो लोकमानले लेखेको राजिनामा पत्र, राजिनामा लेखेर अख्तियार प्रमुख बन्न लोकमानले बाटो खोलिदिएका को हुन् सावित्री? – ZoomNP
Flash_News: भेटियो लोकमानले लेखेको राजिनामा पत्र, राजिनामा लेखेर अख्तियार प्रमुख बन्न लोकमानले बाटो खोलिदिएका को हुन् सावित्री? प्रकाशित मिति: बुधवार, कार्तिक १०, २०७३ समय - १५:५३:११ काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पदबाट राजिनामा दिएको राजिनामा पत्र भेटिएसँगै रिक्त रहेको उक्त ठाउँमा कांग्रेसी नेताका एकजना पत्नीले प्रमुख पदग्रहण गर्न लागेको रहस्य बाहिर आएको छ ।
यसरी, कार्कीको राजिनामा पत्र भेटिएपछि रिक्त रहेको अख्तियार प्रमुख पदमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रकाशमानसिंह लगायतका नेताहरु लागि परेका छन् । भोजपुरकाका कांग्रेस नेता हुन्, नरेन्द्र गुरुङ । उनी लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागिरहेका छन् भने उनका पत्नी सावित्री गुरुङ अख्तियारको कनिष्ट पदमा बसेर जिम्मेवारी वहन गर्दै आएकी छिन् । अहिले यीनै सावित्री गुरुङ अख्तियारको प्रमुख ओहदामा बस्न आँटेकी कागं्रेस निकट स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा चर्चा चलिरहदा उक्त ठाउँमा अन्य पाँच जनाको पनि चर्चा चलिरहेको छ । यी हुन्, हाल कायम रहेका आयुक्तहरु दिप बस्न्यात,नविन घिमिरे,गणेशराज जोशी,सावित्री थापा गुरुङ र राजनारायण पाठक । तर यता, संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको योग्यता तोकिएको छ । जसमा स्नातक गरेको, नियुक्ति हुँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,२० वर्ष अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, ४५ वर्ष उमेर परा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । यसरी नियमअनुसार सरसर्ति हेर्ने हो भने तीनै कनिष्ट पद सम्हाल्दै आएकी सावित्रीले पाउँने स्रोतले बताएको छ । उनले भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा पीएचडी समेत गरेकी छिन् ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाभियोग लागेपछि कार्यबहकका रुपमा दीप बस्न्यातले उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए । उनी राप्रपा नेपाल निकटका व्यक्ति हुन् । तर उनको साँठगाँठ भने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामशरण महत लगायतका उच्च नेताहरुसँग पनि छ । अहिले उनी रिक्त रहेको उक्त पदमा जोडबलका साथ लागिरहेका छन् । तर विगतमा दीप र लोकमान दुबैको मुद्दा एकैपटक तामेलीमा राखिएको थियो । यसैकारण उनी अयोग्य हुने बताइएको छ । यसरी उच्च नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठिसकेको र संवैधानिक परिषदले कनिष्टबाट समेत प्रमुख आयुक्त छान्न सक्ने भएकाले सावित्री गुरुङका लागि संविधानले बाटो खुल्ला गरेको छ ।
अहिले देशमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता संवैधानिक पदमा महिला रहेकै बेला अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पनि महिला नै हुनुपर्छ भन्ने कुराले कांग्रेसको बार्गेनिङलाई बल पुग्नेछ । भने यता प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वयलाई कांग्रेसले सजिलै मनाउँन सक्ने स्रोतले जानकारी गराएको छ ।